Tag: fiainana manokana data | Martech Zone
Tag: fiainana manokana data
Ny tena hevitry ny mpanjifanao momba ny fiainana manokana
Alakamisy Febroary 27, 2014 Alarobia, Febroary 26, 2014 Douglas Karr
Tian'ireo haino aman-jery drôna ny momba ny fampiasan'ny orinasa sy ny fanararaotany data lehibe. Tena miraharaha ve ny mpanjifa? Amin'ny maha mpivarotra ahy, ny hany antenaiko dia ny fampiasana ny angona hanatsarana ny traikefa azoko tamin'ny marika. Indraindray dia somary misy fanantenana loatra izany, saingy rehefa mamaly fanontaniana an-taonina aho ary avy eo tsy natao manokana ilay traikefa dia matetika aho no mandroso. Ahoana ny amin'ny mpanjifanao? Miahy ny amin'ny fomba ahoana ve izy ireo